Semalt SEO एजेन्सीको साथ लिंक भवन र ब्रान्ड भवन
लिंक भवन र ब्रान्ड बिल्डिंग Semalt SEO एजेन्सी
तपाइँसँग एक वेबसाइट छ, र तपाइँका गतिविधिहरूको नतीजाले तपाइँको अपेक्षाहरू पूरा गरिरहेको छैन। चिन्ता नलिनुहोस्!
हामीसँग तपाईंको समस्याको उत्तम समाधान छ। तपाइँले दुई आवाश्यक पोइन्टहरूमा काम गर्नुपर्नेछ: लि brand्क निर्माण र ब्रान्ड निर्माण।
लि building्क भवन एसईओ रणनीतिहरूको एक अंश हो। तपाईंको वेबसाइटमा लिंकहरूको नेटवर्क सिर्जना गरेर, यसले Google लाई देखाउँदछ जुन तपाईंको वेबसाइट यसको डोमेनमा एक सन्दर्भ हो र SERP को शीर्षमा हुनुपर्ने योग्य छ। साथै, तपाईंले आफ्नो ब्रान्डि onमा काम गर्नुपर्नेछ। एक मान्यता योग्य ब्रान्डले तपाईंलाई उच्च मूल्यमा उच्च परिमाण व्यापार बिक्री गर्न अनुमति दिन्छ। यो पनि ज्ञात छ कि बजार नेताहरू कम्पनीहरू हुन् जसले ब्रान्डि inमा भारी लगानी गर्छन्।
यस लेखको उद्देश्य भनेको कसरी वर्णन गर्न सकिन्छ < Seemalt एजेंसी ले लिंक निर्माण प्रक्रिया र ब्रान्ड विकासको योजना बनाउन सहयोग गर्न सक्छ, यस प्रक्रियालाई सकेसम्म पारदर्शी बनाउन र यसलाई तपाईंको बजेटमा अनुकूल बनाउन।
लिंक भवन: यो रणनीति कसरी प्रयोग गर्ने जान्नुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ सर्च ईन्जिनको वर्गीकरण कार्य लि links्कहरूले भनेको केमा आधारित छ? यो यस मार्फत हो कि बोटले सूचकांकमा नयाँ सामग्री पत्ता लगाउँदछ र पृष्ठहरू बीचको सम्बन्ध बुझ्दछ।
यी सम्बन्धहरूले वेबपृष्ठको प्रासंगिकता देखाउँदछ, जुन हुनु आवश्यक छ। खोज परिणामहरूमा राम्रोसँग अवस्थित।
हो, प्रतिक्रियाशील डिजाइनको साथ एक वेबसाइट सिर्जना गर्ने, पृष्ठहरूको गति सुधार गर्ने, र सान्दर्भिक सामग्री सिर्जना गर्ने राम्रो विकल्पहरू हुन्। यद्यपि तपाईंको डिजिटल मार्केटिंगमा उत्तम परिणामहरू हुन पर्याप्त छैन। यो लि building्क निर्माणको अध्ययन गर्ने र तपाइँको वेबसाइटमा लिंकहरूको शक्तिशाली नेटवर्क सिर्जना गर्ने समय हो!
लिंक निर्माण भनेको के हो?
लिंक निर्माण भनेको SEO रणनीतिहरूको सेट हो जुन ट्राफिक उत्पन्न गर्न र खोज इञ्जिनमा तपाईंको अधिकार सुदृढीकरण गर्न पृष्ठमा लिंकहरूको नेटवर्क सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्दछ।
यी लिंकहरू बाह्य वा आन्तरिक हुन सक्छन्। तर जब लिंकहरू सिर्जना गर्ने कुरा आउँदछ, हामी प्राय: बाह्य लि links्कहरूको बारेमा सोच्छौं: त्यो भन्नु हो, अन्य साइटहरूबाट लि links्क लिइन्छ, जसलाई ब्याकलिंक्स वा इनबाउन्ड लिंक पनि भनिन्छ।
यी लिंकहरूको भूमिका गुगललाई लोकप्रियता र मार्केटमा साइटको अधिकार देखाउन हो। खोजीकर्ताले लिंकहरूको खोजी गर्दछ जुन साइटलाई दर्साउँदछ कि यो पर्याप्त उद्धृत गरिएको छ र राम्रो सन्दर्भ छ वा छैन।
अधिक लि links्कहरू तपाईंको वेबसाइटले विश्वस्तबाट प्राप्त गर्दछ, लोकप्रिय, र सन्दर्भित साइटहरू, यो अधिक यसको विशेषज्ञताको क्षेत्र मा प्रासंगिक छ।
अब लिंकहरू किन महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने बारे कुरा गरौं।
लिंकहरू किन महत्त्वपूर्ण छन्?
लिंकहरू महत्त्वपूर्ण छ जबसम्म वेब अवस्थित छ। वर्ल्ड वाइड वेब एक "आपत्तिजनक कागजात" को सेट को रूप मा परिभाषित गर्न सकिन्छ कि "वेब।"
लि therefore्कहरू यस अन्तर्सम्बन्धको लागि जिम्मेवार छ, प्रयोगकर्ताहरू बीच नेभिगेट गर्न अनुमति दिदै। पृष्ठहरू, साइटहरू, छविहरू, भिडियोहरू, र फाईलहरू।
खोजी ईन्जिनले लि sites्कको यस संरचनामा निर्भर गर्दछ वेब साइटहरू खोजी गर्न र श्रेणी दिन।
जहाँ सुरुमा त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा थोरै साइटहरू थिए, सबै ठीकठाक थियो। तर प्रयोगकर्ताहरू, वेबसाइटहरू, सामग्री, र खोजीहरूको मात्रा नाटकीय रूपमा बढेको छ। नतिजाको रूपमा, राम्रो खोज परिणामहरू प्रदान गर्न खोज ईन्जिनहरूले तिनीहरूको एल्गोरिदम सुधार गर्नुपर्‍यो।
यसको अनुक्रमणिका, सबै वेबपृष्ठहरूको सूचीकरण र व्यवस्थित ढ users्गले प्रयोगकर्ताहरूको लागि सामग्री उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ।
यो अभियान पूरा गर्न, खोज इन्जिनहरूले एक अर्कामा जोडिएको संरचना प्रयोग गरे। वेब यो आज सम्म काम गर्दछ; लि links्कहरूले खोजी ईन्जिन बट्सको वेब मार्गहरू देखाउँदछ, जुन नयाँ सामग्री वा अद्यावधिकहरूको लागि साइटहरूमा जानेछन्।
त्यसबेलादेखि, अब वर्णमालामा साइटहरू सूचीबद्ध गर्न आवश्यक थिएन। अर्डर पृष्ठहरूले के प्रस्ताव गर्‍यो र तिनीहरूसँग सूचनाहरू छन् कि प्रयोगकर्ताहरूले फेला पार्न खोजेका हुन् भनेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक थियो।
साइटको प्रासंगिकता मापन गर्ने उद्देश्य थियो। लिंकको संख्या यो अन्य साइटहरूबाट प्राप्त भयो। शैक्षिक क्षेत्रमा तर्क यस्तै थियो: लेखकले जति धेरै उद्धरण पाउँछन्, उनीसँग उनको ज्ञानको क्षेत्रमा बढी अधिकार हुन्छ।
त्यसोभए , साइटले लि more्क गर्ने अधिक लिंकहरू, यो यसको विशेषज्ञताको क्षेत्रमा बढी सान्दर्भिक हुन्छ।
त्यसकारण, लि links्कहरूले वेबसाइटको अधिकार प्रदर्शन गर्दछ। यो पनि कसरी खोजी ईन्जिनहरू र एसईओ पेशेवरहरूको लागि लिंकहरू महत्त्वपूर्ण भएको छ।
गूगलले लि does्क कसरी गर्छ?
गुगलको एल्गोरिथ्मले श्रेणीको श्रेणीमा धेरै कारकहरूको प्रयोग गर्दछ। पृष्ठ, र ती मध्ये केही कारकहरू लि's्कको गुगलको मूल्या into्कनमा जान्छन्।
अब कुन लिंकहरूमा हामीले हाम्रो लि link्क निर्माण रणनीतिमा विचार गर्नुपर्दछ?
यो Google द्वारा अपनाईएको पहिलो मापदण्ड हो। यो पृष्ठ रैंकिंगको आधार थियो: साइटले अधिक लि more्कहरू लिन्छ, यो त्यति सान्दर्भिक हुन्छ। पृष्ठमा लिंकहरूको स्ख्याले वेबमा यसको लोकप्रियता देखायो।
आज, यो मापदण्ड Google लिंकको मूल्या in्कनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू मध्ये एक रहेको छ। यो एक्लै आउन सक्दैन, यद्यपि; प्रासंगिक र भरपर्दो नभएका साइटहरूबाट धेरै लिंकहरू लिन यो बेकार हो। हामी तलका कारकहरूसँग मात्रा संयोजन गर्न आवश्यक छ।
तपाईलाई के लाग्छ के बढी मूल्यवान छ: एक व्यक्ति जो धेरै चोटि भन्छन कि तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ, वा धेरै व्यक्तिहरू जसले एक पटक तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ भनेर भन्छन्? अधिक मानिस जसले तपाईको राम्रो बोल्छन्, तपाईको समूहमा अधिक मान्यता पाउनुहुन्छ।
यो पनि Google ले प्रत्येक वेबसाइटको मूल्यांकन र वर्गीकरण गर्दछ। खोजी ईन्जिनका लागि, साइटले अधिक अधिकार प्रदर्शन गर्दछ जब यसले विभिन्न बिभिन्न डोमेनहरूबाट लि receives्कहरू प्राप्त गर्दछ। त्यसकारण, लि the्क प्रोफाइलको विविधता पनि मूल्या in्कनमा समावेश छ।
गुगलले लिंकको वरपरको प्रस understand्ग बुझ्नको लागि बुझ्न सक्दछ। यो वास्तवमै प्रासंगिक हो कि होइन।
गुगलले लिंकको छेउमा देखा पर्ने शब्दहरूलाई पनि मूल्याates्कन गर्दछ, जसलाई सह-घटनाहरू पनि भनिन्छ। ती शब्दहरूले खोजी ईन्जिनलाई पृष्ठको शीर्षक बुझ्न र लि determine्कले त्यस प्रस in्गमा अर्थ राख्दछ कि गर्दैन भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ।
एch्कर पाठ, जुन लिंकको क्लिकयोग्य टेक्स्ट हो, लिंक गरिएको पृष्ठको बारेमा धेरै भन्छ। सामान्यतया, यो कुञ्जी शब्द वा लि the्कमा क्लिक गर्दा प्रयोगकर्ताले पृष्ठमा फेला पार्ने छोटो विवरण प्रदान गर्दछ। तसर्थ, गुगलले यो कारक अनुक्रमणिका पृष्ठहरूमा प्रयोग गर्दछ।
खोजी ईन्जिनले रैंकिंगमा साइटहरूको विश्वसनीयतालाई विचार गर्न थाल्छ।
त्यसोभए, तपाईंको साइट विश्वसनीय साइटहरूमा नजिक छ, तपाईंको वेबसाईट गुगलमा अधिक विश्वसनीय हुनेछ र तपाईंको साइटले लि link्कको अधिक रस पाउनेछ।
अन्य पृष्ठहरूबाट तपाईंको वेबसाइटमा लिंकहरू
निर्भरता सिर्जनामा, तपाईं आन्तरिक र बाह्य निर्भरताहरूको साथ काम गर्न सक्नुहुनेछ। जे होस्, यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि कुन र्या ranking्कि inमा सबैभन्दा बढी वजन छ।
बुझ्नको लागि, सोच्नुहोस्: के गुगलले तपाईंको साइटले आफुको बारेमा के भन्छ भन्नेमा बढी भरोसा राख्छ ( आन्तरिक लिंकहरू) वा अन्य साइटहरूले तपाईंको साइट (बाह्य लिंकहरू) को बारेमा के भन्छ?
तपाईंको साइटबाट तपाईंको आफ्नै पृष्ठहरूमा लिंक
लिंकहरू तपाईंले सम्मिलित गर्नुहुन्छ। तपाईंको आफ्नै वेबसाइट ब्याकलिks्क जत्तिकै भारी छैन, तर यसले गुगललाई तपाईंको पृष्ठहरूको पदानुक्रम देखाउन मद्दत गर्दछ।
तपाईंको साइटबाट अन्य पृष्ठहरूमा लिंक
थप रूपमा, तपाईंको पृष्ठहरूबाट लि that्कहरू जुन बाह्य साइटहरूतर्फ डो lead्याउँदछ रैंकिंगमा पनि वजन छ।
गुगलले पनि मूल्याates्कन गर्दछ कि तपाईं लोकप्रिय, विश्वसनीय, र आधिकारिक साइटहरू।
लि gain्क लाभ गति
एसईओ को शुरुआती दिनहरूमा, ब्याकलिks्कहरू कालो टोपीको मुख्य उपकरणहरू मध्ये एक थियो, जुन अभ्यासलाई धोका दिन्छ। अन्वेषक।
धेरै वेबसाईटले लिंक फार्महरू सिर्जना गर्‍यो वा लि buy्कहरू किन्न र बेच्न प्रोग्रामहरू प्रयोग गर्‍यो। यसैले उनीहरूले छिटो ब्याकलिks्कहरू प्राप्त गरे। यसको परिणाम स्वरूप गुगलले यस प्रकारको अभ्यासलाई पहिचान गर्न र दण्डित गर्नको लागि यसको एल्गोरिथ्मलाई सुदृढ पारेको छ। यसलाई प्रमाणित गर्नका लागि एक स्रोत लि winning्कहरूको लि winning्कको गति जाँच गर्नु हो।
छोटो अवधिमा धेरै लिंकहरू प्राप्त गर्नु सामान्यतया कालो टोपी प्रणाली सेट अप गर्दछ, किनभने प्राकृतिक लि link्क प्रोफाइलको प्रगतिशील बृद्धि छ।
नोफलो x डोफलो
गुगलले पृष्ठमा लिंकहरूको विश्लेषण गर्दा मूल्या evalu्कन गर्ने अर्को कारक nofollow विशेषता हो। जब यो विशेषता लि of्कको कोडमा सम्मिलित हुन्छ, बोटलाई थाहा हुन्छ कि यो लि the्क गरिएको पृष्ठको रैंकिंगको लागि ध्यानमा लिनुहुँदैन।
अर्कोमा शब्दहरु, nofollow लिंकहरु लिंक को रस प्रसारित गर्दैन।
ब्रान्ड निर्माण: बजार, प्रतिस्पर्धीहरू र लक्षित दर्शकहरूको आवश्यकताहरूको विश्लेषण
एक अद्वितीय ब्रान्ड सिर्जना गर्नुहोस्, तपाईंलाई प्रतिस्पर्धीहरूको क्षमता र कमजोरीहरूमा अप-टु-डेट जानकारी आवश्यक पर्दछ, साथ साथै तपाईंको लक्षित दर्शक को हो भनेर बुझ्नुपर्दछ।
साहित्य खोजीको क्रममा विश्लेषकहरूले सूचना विश्लेषणका methods विधाहरू प्रयोग गर्दछन्।
- संरचनात्मक रूपमा कार्यात्मक। हामी विश्लेषण गर्दछौं। बजार खेलाडीहरू मात्रै होइन, कच्चा माल उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, रसद, यातायात कम्पनीहरू, वितरकहरू, र विक्रेताहरू।
- तुलनात्मक विश्लेषण। हामी समान प्रकारको गतिविधि भएका कम्पनीहरूको विश्लेषण गर्छौं। उदाहरण को लागी, यातायात कम्पनीहरू वा एजेन्सीहरू जसले ब्रान्डलाई बढावा दिन्छ।
- सामग्री विश्लेषण। हाइलाइट ट्रेन्डहरू। । उदाहरण को लागी, वाइन उत्पादनहरु को बजार विश्लेषण गरेर, हामी लेबल डिजाइन मा नवीनतम विकासहरु को बारे मा कुरा।
- मा - डिपेथ विश्लेषण। हामी बाहिरी वातावरणबाट आउने अवसर र खतराहरू कम्पनीका फाइदाहरू र नोक्सानहरू निर्धारित गर्दछौं।
अध्ययनको नतीजाको रूपमा, हामी एक विशिष्ट व्यापार क्षेत्र, उद्योग विकासको प्रवृत्ति, र बजार सम्भावनाहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्छौं। तथ्या्कले ब्रान्ड विकास भेक्टरलाई सही रूपमा परिभाषित गर्न मद्दत गर्दछ।
तालिम पाएको छ? ब्रान्ड सिर्जना गर्ने चरणहरू अध्ययन गर्न सुरू गरौं। अवश्य पनि, यो लेख पढिसकेपछि, तपाईं यो निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ कि सबै कुरा सजिलो र सरल छ र कोही पनि आफ्नै ब्रान्ड सिर्जना गर्न सक्दछन्। जे होस्, राम्रो ब्रान्डको विकासको लागि, परियोजना ब्यबश्थापन, विज्ञापनको ज्ञान, डिजाईन, र मनोविज्ञानको ज्ञान, साथ साथै बजारको अवस्थाको बारेमा पूर्ण जानकारी जहाँ तपाईं आफ्नो ब्रान्ड स्थित गर्ने योजना बनाउनुपर्दछ।
ब्रान्डि project परियोजनामा ​​निम्न मुख्य चरणहरू सामेल छन्:
डिजाइन, उद्देश्यहरूको विवरण र योजनाको योजना।
हालको बजार स्थितिको विश्लेषण (मार्केटि research अनुसन्धान)।
ब्रान्ड तत्वहरूको विकासको लागि प्राविधिक विवरणहरूको मस्यौदा र अपडेट।
एक कार्यवाहकको खोजी गर्दै र कार्यान्वयन नियन्त्रण गर्दै। काम।
ब्रान्ड प्रचार र यसको प्रभावकारिता निगरानी।
यदि तपाईं आफ्नै ब्रान्ड छ तर यो यसको लोकप्रियता र प्रासंगिकता गुमाउँछ र यसको स्थान गुमाउँछ। बजार र यसको उपभोक्ताहरूमा, त्यसो भए तपाईंले आफ्नो ब्रान्ड परिवर्तन गर्नु आवश्यक पर्दछ। ग्लोबल अभ्यासले देखाउँदछ कि एक सफल ब्रान्ड परिवर्तनले ब्रान्डमा नयाँ जीवन सास लिन सक्छ, तर नयाँ ब्रान्ड निर्माण महँगो छ। तसर्थ, तुरुन्त बेलुका सबै काट्ने र फेरि सुरु गर्न हतार नगर्नुहोस्।
हामी ब्रान्ड डिजाइन प्रक्रियाको प्रत्येक चरणलाई विस्तृत रूपमा विचार गर्नेछौं।
चरण १: उद्देश्य डिजाइन गर्नुहोस्, र एक ब्रान्ड विकास परियोजना योजना गर्नुहोस्
योजना तपाइँको परियोजना को सफल कार्यान्वयन को कुञ्जी हो। स्पष्ट र राम्ररी सोचेको प्रक्रिया बिना नै, तपाईं आफ्नो प्रोजेक्ट पूरा गर्न सक्नुहुने छैन सबैको दृष्टि गुमाए बिना।
योजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको हो। तपाईका कार्यहरू व्यवस्थित गर्न, समयसीमा र कार्यहरूको अनुक्रमहरू सेट गर्न, बजेट सेट गर्नुहोस्, र उद्देश्यहरूको उपलब्धिको मूल्या evalu्कन गर्ने माध्यमहरू छन्।
यस चरणमा, यो एक ब्रान्ड सिर्जना गर्ने उद्देश्य (र संस्थाको मिशनसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ), अन्य ब्रान्ड वा कर्पोरेट ब्रान्डको आर्किटेक्चरमा ब्रान्डको स्थान, र ब्रान्डको इच्छित सुविधाहरू निर्धारित गर्न आवश्यक छ, र राम्रोसँग लेख्न आवश्यक छ। (गुणस्तर, जीवन चक्र, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, आदि), र मापनयोग्य ब्रान्ड प्यारामिटरहरू निर्माण गर्न, जसको आधारमा यसको प्रभावकारिता अझ मूल्या further्कन गरिनेछ।
यो पनि हो कम्पनीका उपलब्ध स्रोतहरूको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ (वित्तीय, श्रम, सूचना, आदि), परियोजना सर्तहरू योजना गर्न, र संकेत गर्न टी उनले परियोजनाको लागि कम्पनीको बजेट। यदि प्रोजेक्ट धेरै व्यक्ति द्वारा प्रबन्धित गरिएको छ, तपाईंले परियोजनाको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको समूह निर्धारण गर्नु पर्छ।
चरण २: वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र बजार अनुसन्धान
एकचोटि तपाईंले परिभाषित गर्नुभयो ब्रान्ड विकास योजना, तपाईंले हालको बजार अवस्थाको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। यस चरणलाई धेरै उप-चरणहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
- ब्रान्ड जानकारीको स Collection्ग्रह र विश्लेषण
< div> - प्रतियोगी विश्लेषण
- लक्षित श्रोताको विश्लेषण
< Div> २.१। ब्रान्ड जानकारी जम्मा गर्नु यसको ब्रान्डको आवश्यकता तोक्न यसको मूल्य क्षेत्र र यसको बजार (क्षेत्रीय, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय) परिभाषित गर्नु समावेश छ। यो पनि सूचित गर्न आवश्यक छ कि कति लामो ब्रान्ड बजारमा उपस्थित हुनेछ र मौसम मौलिक छ वा छैन।
यदि कम्पनीसँग नारा र वर्तमान संचार छ भने, विश्लेषण गर्नुहोस्। यो (निश्चित गर्नुहोस् कि सबै ब्रान्डका लागि उपयुक्त छ वा यसको सिर्जना आवश्यक छ)। अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेको मार्केटिंग उद्देश्यहरूको परिभाषा हो जुन ब्रान्डले एकदेखि तीन वर्षको अवधिमा सामना गर्दछ (बजार सेयर, बिक्री बढाउने, कम्पनीको छवि आदि सिर्जना गर्ने र सुधार गर्ने आदि)।
नियमको रूपमा, यी सबै जानकारीहरू ज्ञापनपत्रमा व्यवस्थित गरिएको छ (ज्ञापन पत्र छोटो रूप हो जहाँ भविष्यका प्रोजेक्टका मुख्य मानदण्डहरू निर्धारित गरिन्छ)। एक संक्षिप्त भरिएर, तपाईं समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ र विस्तृत तरीकाले सबै उपलब्ध जानकारीको विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ।
२.२। अर्को चरण प्रतिस्पर्धी विश्लेषण हो। सबैभन्दा ठूलो गल्ती यो हो कि तपाइँसँग कुनै प्रतिस्पर्धी छैन वा त्यहाँ केही प्रतिस्पर्धी छन् र तपाईंले उनीहरूमा ध्यान दिनु हुँदैन। सबैजनासँग प्रतिस्पर्धी हुन्छ र प्रतिस्पर्धाको डिग्री दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। तसर्थ, सबै भन्दा पहिले, तपाइँ प्रतियोगीहरु को शक्ति र कमजोरीहरु पहिचान गर्न आवश्यक छ (एक पूर्ण विश्लेषण गर्नुहोस्)। यो भन्नु पर्छ कि कसैले पनि तपाईं भन्दा राम्रो गर्न सक्दैन! याद गर्नुहोस्, यो प्रक्रिया अनन्त हो, र तपाईंलाई धोका दिइनु हुँदैन किनभने तपाई सोच्नुहुन्छ कि पहिले नै सबै कुरा थाँहा छ।
२.3। लक्षित दर्शक विश्लेषणको चरणमा (उपभोक्ता प्राथमिकताहरूको अध्ययन), तपाइँको लक्षित श्रोता (उमेर, लि ,्ग, शपिंग स्थानहरू, आदि) स्पष्ट रूपमा वर्णन गर्न आवश्यक छ, तर यो पनि थाहा पाउनुपर्दछ कि खरीददारले के चाहान्छ र उसको कुन आवश्यकताहरू पूरा भइरहेको छैन। यहाँ मुख्य समस्या यो हो कि उपभोक्तालाई कहिल्यै थाहा हुँदैन कि उनी के चाहान्छन्। त्यसकारण, तपाईको सूक्ष्म मनोविज्ञानी हुनु पर्छ तपाईको विचार लाई उपभोक्ताको प्रतिक्रिया को भविष्यवाणी गर्न। यो बुझ्नको लागि कि उपभोक्ताहरूलाई किन खरीद गर्न प्रेरित गर्छ महत्त्वपूर्ण छ।
सबै अध्ययनहरू धेरै विधिहरू मार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ: क्षेत्र अनुसन्धान (प्राथमिक डाटा विधि) र साहित्य अनुसन्धान। (माध्यमिक डेटा विधि, डेस्क अनुसन्धान पनि भनिन्छ)। दुई विधिको बिचको भिन्नता भनेको डेस्क अनुसन्धानले पहिले स and्कलन गरिएको र पहिले नै उपलब्ध जानकारी प्रयोग गर्दछ, जबकि क्षेत्र अनुसन्धानले स्क्र्याचबाट विशेष उद्देश्यहरू समाधान गर्न डाटा प्रयोग गर्दछ। थप रूपमा, मार्केटिंग अनुसन्धान दुबै मात्रात्मक र गुणात्मक छ। मात्रात्मक विधिहरूले सटीक संख्यात्मक डाटा प्रदान गर्दछ; यो सामान्यतया सांख्यिकीय जानकारी हो जसको आधारमा विभिन्न गणना र भविष्यवाणीहरू गर्न सकिन्छ।
गुणस्तरीय विधिहरूको प्रयोग गरेर, तपाईं उपभोक्ताहरूको वास्तविक आवश्यकताहरू, उत्पादसँग उनीहरूको सम्बन्ध, उनीहरूको खरीदका कारणहरू, र अन्य धेरै निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। यस डेटाको आधारमा, तपाईं कसरी उत्पादन सुधार गर्न सक्नुहुनेछ, विज्ञापन अभियानमा ध्यान केन्द्रित गर्न लायकको के छ, र उत्पादमा परिवर्तन गर्न लायक के छ ताकि अधिक ग्राहकहरू आकर्षित गर्न सकिन्छ, र यस्तै। div>
साहित्य अनुसन्धानले क्षेत्र अनुसन्धानमा धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ: कार्यान्वयनको गति, जानकारीको बहु स्रोतहरूको उपलब्धता, र कम वित्तीय र श्रम लागत। जहाँसम्म, जानकारी "ताजा" र अप-टु-डेट छ भनेर सुनिश्चित गर्न सधै आवश्यकता हुन्छ।
त्यहाँ "पा the्गा पुनःबहाली गर्न" आवश्यक पर्दैन। फेरि फेरी, खास गरी यदि तपाई जस्तो समस्या र समस्याहरु पहिले नै उठाइएको छ। उत्तम समाधान भनेको पहिले नै उपलब्ध र संकलन गरिएको जानकारीको प्रयोग गर्नु हो। यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कि तपाइँ कार्यमा लाग्नुभएको छ भने Semalt पेशेवरहरू सम्पर्क गर्नुहोस्।
Semalt का मार्केटिंग विशेषज्ञहरु गुणात्मक हिसाबले तपाइँको लागी सबै आवश्यक अनुसन्धानहरु को संचालन गर्नेछ र एक रिपोर्ट प्रदान गर्दछ जसमा सबै जानकारीहरु एक सरल र बुझ्ने शैलीमा प्रस्तुत गरिन्छ, र सबै चीज "आफ्नै शेल्टमा राखिन्छ।" div>
केवल लगातार निगरानी र ब्रान्ड प्रदर्शनको विश्लेषण, बजार अवस्था, प्रतिस्पर्धी वातावरण, र उपभोक्ताहरू तपाईंको ब्रान्डको दीर्घकालीन र सफल उपस्थितिको ग्यारेन्टी गर्न सक्छन्।